तामान र भुजी खोलामा आएको बाढीले बुर्तिवाङ बजारमा हाहाकार ! | TAJBIJ.COM
तामान र भुजी खोलामा आएको बाढीले बुर्तिवाङ बजारमा हाहाकार !
बुर्तिवाङ २०७३ साउन ११ । भीषण वर्षासंगै तमान खोला र भुजी खोला उर्लिएर आएपछी खोला किनारमा अवस्थित बुर्तिवाङ बजारको तल्लो भाग उच्च जोखिममा परेको छ । मध्यराति २ बजे देखी स्थानीयवासीहरुमा रुवावासी चलेको छ । मानिसहरु हातमा लाईट बाल्दै एताउता दौडीरहेका छन् । बुर्तिवाङ बजारवासीहरुमा हाहाकारको अवस्था रहेको हाम्रा सहकर्मी बिमल खडकाले फोनबाट जानकारी दिएका छन् । बुर्तिवाङ बजारको लक्ष्मीकुण्डमा रहेको बाँसघारी बढीले बगाएको छ ।
बडीगाड खोला किनारमा जम्मा भएका बुर्तिवाङ बजारवासी ।
अपडेट: लक्ष्मी कुण्ड नजिक रहेको कृष्ण विकको घर खोलाले बगाउने अवस्था छ भने त्यहाँ रहेको गाविस भवन र युनि मन्टेश्वरी स्कूल तथा रब्बिल मियाँको फर्निचर उद्योगमा बाढी पस्न लागेको छ । उता तमान खोला किनारमा रहेको बोँगादोभान बजार पनि उच्च जोखिममा रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन ।
अहिले सम्म कुनै मानवीय क्षेतीको समाचार छैन ।
स्मरणीयछ, भुजी खोला र तमान खोलाको दोभान देखी बुर्तिवाङ बजार सुरु हुन्छ । यी दुई खोला जोडिएपछी बडीगाड खोला नामले पुकारिन्छ । बुर्तिवाङ बजारको केहि तल निसी, बोहोरा गाउँ र देविस्थान गाविस भएर बग्ने निसी खोला बडीगाड खोलामा मिसिन्छ ।
बाढीले बुर्तिवाङ बजारको माथिल्लो भागलाई त्यति खतरा नदेखिएपनि नदी किनारमा रहेको भाग उच्च जोखिममा रहेको छ ।
२०७३ साउन ७ गते पनि बुर्तिवाङ बजारको किनारबाट बग्ने बडीगाड खोलामा यस्तै भीषण बाढी आएको थियो ।
अपडेट: उता खर्वाङबाट सहकर्मी कमल पौडेल ‘अनुरागी’ले दिएको जानकारी अनुसार बडीगाड, दरम र गिरिङ्दी खोलामा पानीको बहाव निकै बढेको छ । गुल्मी जिल्लाको भूवाचिदीको तल्लो बजारमा बडीगाड खोला पस्न लागेको स्थानीयले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । वर्षा रोकिएको छैन, नदी किनारमा रहेका मानिसहरुलाई सतर्क गराउने कार्य भैरहेको छ । खर्वाङ बजार र गुल्मीको वामी बजारमा विद्युत अवरुद्ध छ ।
थप समाचारकालागि तजबिज डटकम हेर्दै गर्नु होला !
Previous Postकलाकार भुमिले आफ्नी प्रेमिकालाई सोधे, तिम्रो दिलमा कुन छ ?Next Postबडीगाडको बाढीले उत्पात, नदी किनार जलमग्न, सयौँ रोपनी जग्गा बगायो !